🥇 ▷ Laptops-yada 2-aad ee ugu fiican ✅
Laptops-yada 2-aad ee ugu fiican
Markay tahay xulashada hal laptop la badalan karo, go’aanka waa mid fudud. Dell XPS 13 2-in-1 ma ahan kaliya laptop ugu fiican ee la beddeli karo ee aad ka dooran karto maanta, sidoo kale waa mid ka mid ah kumbuyuutarrada ugu fiican suuqa. Moodh laga soo qaatay xariiqda ‘Dell’ ee guusha guuleysata ee ‘XPS’, qaabkiisa 2-in-1 kama dambeeyo xawaaraha, awoodda ama wax soosaarka sababtoo ah xijaabkiisu wuxuu wareegi karaa 360 digrii. Kani waa laptop weyn, oo aan shuruud looga baahnayn, oo xaaladdiisa beddeli kara ee boqornimadeeda waa salaaqda keegga.
In kasta oo moodalkan lasiidaayay dabayaaqadii 2019, Dell wuxuu adeegsaday Moodhka 2-in-1 si loogu xiro waddo cusub oo naqshad loogu talagalay labbiska dhaqameed ee 13 ″ iyo 15 ″ XPS. In kasta oo nashqadeynta moodooyinkaas cusubi ay xoogaa ka tayo fiican yihiin waxa aan ku arki karno aaladdaan, daruuri maahan wax xun. Dell waxay ku dhegan tahay naqshadeynta fiber kaarboonka, oo leh bir bir qafiif ah oo dareemaya xoog iyo adkaysi. Daabaca kaarboon kaarboon ayaa laga yaabaa inuusan noqonin qof walba, laakiin indhaheena, waxay bixisaa naqshad geesinimo leh oo nadiif ah oo u qalanta astaanta XPS.
Qaabkan cusub wuxuu bixinayaa dhowr isbedel oo yar marka loo eego kuwii hore ee 2-in-1 iterations ah. Keyboard-ka hadda wuxuu maraa gees-ka-gees, wuxuu siiyaa dadka isticmaala qaab-ballaarin sidii aad ku heli lahayd kumbuyuutar kale oo 13 other laptop ah oo suuqa ku yaal sannadka 2020. , oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa intaa dheer, geeska midig ee sare ee keyboard-ka, waxaad kaheleysaa batoon awoodeed dib loo habeeyay oo leh batoono kujira gudaha Windows Windows Sawirka Sawirka Sawirka oo la jaan qaadaya Hello.
Si kastaba ha noqotee, isbeddelka weyn wuxuu ka yimid shaashadda: iyada oo ay wali ku jirto isla isha-qabashada, naqshadeynta ugu yar ee suuq gebi ahaanba laptop uu raacay, waxay sidoo kale u dhaqaaqday 16: 10 waji cabir. Halka 16: 9 ay kaamil tahay. Aflaanta iyo ciyaaraha, qofkasta oo ka shaqeeya aaladaha wax soo saarka ayaa kuu sheegaya in 16:10 uu yahay boqorka. Markaad haysatid booskaas dheeriga ah ee kor iyo hoosba aaladda wuxuu isbedel weyn ku sameynayaa habka aad u isticmaashid laptop-ka maalin walba, waana wax weyn in la arko Dell oo raacaya tartankiisa ugu dhow, Apple, isagoo u siinaya dadka isticmaala shaashad sare.
Gudaha, Dell waxay kor u qaadday processor-ka XPS illaa jiilka tobnaad ee Intel Core i7-1065G7. Kani waa guntin-hooseeya awood badan, oo awood u leh inuu qabto howlo firfircoon oo cadaalad ah adigoon burburin nolosha batteriga. Sida iska cad, la’aanta la’aanta kaararka garaafka ee loo qoondeeyay waxay ka dhigan tahay 4K tafatirka fiidiyowga iyo ciyaaraha degdega ah ayaa asal ahaan ka baxsan miiska, laakiin sawir qaabeynta, tafatirka fiidiyowga fudud, iyo xitaa qaar ka mid ah ciyaaraha aasaasiga ah ee jaangooyooyinku hooseeya waa inay suurta gasho aaladdan. Intaa waxaa dheer, oo leh 16GB oo RAM ah iyo 512GB SSD ah, ayaa lagu daboolay dhammaan wejiyada wax soo saar.
Waxaas oo dhan oo aan cinwaan looga dhigin 2-in-1 maroodi qolka. Ku dhawaad ​​seddex rodol, XPS 13 wey adagtahay in laydh loogu yeedho, laakiin kama culus kan inta badan laptopsyada kale ee suuqa lagu beddelo maanta. Moodeelka sanadkaan wuxuu muujinayaa xirmo cusub oo loo habeeyay labo-kaas oo sii ahaan doona mid adag oo yareynaya cabirkiisa marka loo eego moodooyinka hore ee 2-in-1 ee XPS. In kasta oo dhalleeceeyayaasha qaarkood ay xuseen in Windows 10 aysan had iyo jeer u wareegin habka kiniiniga ka dib marka aad shaashadda ka duubto, arrimahan badankood waxaa lagu hagaajiyay hagaajinta cayayaanka.
In la arko Dell oo sii wadata hal-abuurka iyo laambarka dhankeeda ah ee ‘XPS line’ waa mid xiiso badan, waana ay adag tahay in lagula taliyo laptop-ka-ujeedada guud ee hada aan Dell samayn. Haddaad raadineyso badal 2-in-1 ah oo aadan miisaaniyad dhab ah ku jirin, XPS 13 ayaa ah habka ugu fiican ee loo maro. In kasta oo moodada sare ay kugu kacayaan $ 1,649, moodooyinka leh Core i3 ama processor Core i5 waxay bilaabaan kaliya $ 999.